Omume kachasị mma maka fordị Mmelite Ọkwa na Ọnọdụ | Martech Zone
Amaghị m na m gaara akpọ infographic a Otu esi emepụta ozi zuru oke; agbanyeghị, ọ nwere ụfọdụ nkọwa doro anya banyere ihe omume kacha mma na-arụ ọrụ maka imelite blọọgụ gị, vidiyo na ọnọdụ mmekọrịta gị n'ịntanetị. Nke a bụ okwu nke anọ nke akwụkwọ ozi ha na - ewu ewu - ọ na - agbakwunye na ịde blọgụ na vidiyo.
Itinye onyonyo, ịkpọ oku ime ihe, nkwalite mmekọrịta mmadụ na hashtags bụ ezigbo ndụmọdụ ma na-elegharakarị anya dị ka ndị ahịa na-arụ ọrụ ịgbasa ọdịnaya ha. Echeghị m na ọ bụ ihe ijuanya na a na-enweta nsonaazụ kacha mma mgbe ị na-ege ntị nke ọma na usoro ị na-etinye ma na-anwale ma ha anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Enweghị mba zuru okè biputere na aru oru nye onye obula - tinyere oge nke edere. Anyị na-ebipụta n'isi ụtụtụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị na-na Midwest ya mere site na mbipụta n'oge anyị nwere ike iru n'ofe ọdọ mmiri n'ehihie, rute East Coast n'ụtụtụ, wee rute West na-eri… oge kachasị maka azụmahịa gị ma ọ bụ mbipụta gị ga-adị iche na ị nọ n'ógbè gị , mba, mba na mgbe ndị na-ege gị ntị na-a attentiona ntị. Ọ bụrụ na m bụ ebe mgbakọ; ima atu, achoro m ibiputa na mgbede mgbe ndi folks na-acho abali ha.
Tags: ndaberemkpọtụ azụoge kacha mma iji biputereoge kacha mma iji meliteblog postụdịkpọọ ka emenkọwaagbacommentsobodonkọwaedeziFacebook-esogoogle +havehtagsinstagramdị kanjikọbanyeremobile enyi na enyioge kacha mmaPinterestpost ụdịakara edemedeweghachiteihe oyiyi dị mkpazaghachiretweetọchịchị nke otu ụzọ n'ụzọ atọmee ka urlmmekọrịta mmadụụda dị mmaịkpadotagsuzo atoogeahatrendingtrending isiokwutumblrTwitterurl shortenervineokwu ọnụyoutube
Etu ị ga-esi nweta Fans Creatmepụta na Shakekọrịta Ọdịnaya maka Gị
Enweghị azịza gị na-ebibi Usoro Mgbasa Ozi Gị